मिचिएको सी’माको माग गर्दै धुर्मुस-सुन्तली यसरी प्रस्तुत,,,हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मिचिएको सी’माको माग गर्दै धुर्मुस-सुन्तली यसरी प्रस्तुत,,,हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) ।
श्रीमान् देशको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । यहीबेला कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिन्छ । संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले देशमा लकडाउन गरिरहेको हुन्छ । लकडाउनको विकल्प हुन सक्छ कि सक्तैन ? त्यसतर्फ सरकारले ध्या’न दिएको छैन । तर, निरन्तर लकडाउन थपिरहन्छ ।
Previous नेकपा भित्रको क’लह, तपाईको विचारमा के प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ ?
Next तीनकुनेमा बुद्धपार्क नि’र्माण गरिँदै…हेर्नुहोस् ।